क्षमायाचना अभियानसँग जोडिएका सबालको जवाफ - Madhesi Youth
क्षमायाचना अभियानसँग जोडिएका सबालको जवाफ
June 18, 2016 June 18, 2016 Praveen Yadav0Comment We Are Sorry Campaign, क्षमायाचना अभियान
रीता साह, सामाजिक अभियन्ता तथा मधेशी महिला अधिकारकर्मी
गत साता समाजिक संजालमा सबैभन्दा चर्चाका विषय रहयो मधेसमा चलेको “क्षमायाचना अभियान”। अधिकाँसले अभियानलाई सकारात्मकरुपमा लिएको पाइयो । यस्ता अभियान देशभरीनै चलाउनु पर्ने पक्षमा पनि केही देखिए ।
तर केही मधेशी संचारकर्मीहरु नै अभियानको विरुद्धमा लागेको देखिन्छन् । अभियानको विरोध गर्दा व्यक्तिगत आक्षेप, डलरको खेती, आन्दानीको लेखा जोखा देखि छोराछोरीको स्कुल सम्मको हिसाब किताब गर्न पछि परेनन् ।
तर जस जसले यो अभियान शुरु गर्नुभयो, वँहाहरुको बारे खासै बोलेको देखिएन् । हामीलाई मात्रै टारगेट गरेको देखियो । के अभियानकर्ताहरुबीच जातियताको आधारमा विभाजन ल्याउन खोजेको हो कि ?
विरोध गर्नेहरुको तर्क दिनुहुन्छ कि यो अभियानले अहिलेको जारी राजनितिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ । वर्षोदेखिको जातिय सद्धभावलाई खलवलाउँछ । यो आन्दोलन डलरको खेती हो । सामाजिक संजालमार्फत सस्तो लोकप्रियता बटुल्नको लागि गरेको आदि ।
अब म वँहाहरुलाई जवाफ दिन चाहन्छु:
के मधेसी समुदायसँग राजनैतिक समस्या मात्र छ ? के मधेसी समाज भित्र समाजिक विभेद छैन् ? के यस अभियानमा लागेकाहरुले मधेसमा जारी आन्दोलनको बिरोध गर्नुभएको छ ? क्षमायाचना अभियान एउटा सामाजिक आन्दोन हो । राजनितिक आन्दोलन सुस्त भएको बेला यस अभियानले त्यसलाई झन सहयोग पुरयाउँदैन र ? यो अभियानले बरु मधेसी समाजमा कायम रहेको जातिय विभेदलाई कम गर्छ र चलेको मधेश आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदैन बरु बलियो बनाउन मदत गर्छ ।
जहाँसम्म मधेसी समाजमा वर्षोदेखिको जातिय सदभावको रहेको थियो भनिन्छ, त्यो सत्य होइन् । जातिय सद्धभाव थिएन । दलितहरु सहेर बसेका थिए । हामी उच्च जातका वा मध्यम जातकाले दलितहरुसँग छुवाछुत जस्ता अमानविय ब्यवहार गरेकै हो । त्यसैले क्षमायाचना अभियानले सद्धभाव खलबलिदैन बरु झन मजबुत हुन्छ ।
हरेक अभियान चलाउन डलर नै चाहिन्छ भने होइन, इच्छा शक्ति भए पुग्छ । यदि कसैलाई त्यसतो लाग्छ भने प्रमाण पेश गर्न आग्रह गर्दछु । जहाँसम्म देखावटी को कुरा छ त्यो त समयले प्रमाणीत गर्ने हो । यसअघि सामाजिक संजालमा कस्ता कस्ता फोटोहरु राखेको कसैबाट लुकेको छैन् । आफुहरु जस्तो पनि फोटो राख्दा हुने तर अरुले राम्रो काम गरेको फोटो राख्दा पनि हलिखल्ली मचाउने ?
अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु
के राजनितिक माग पुरा नहुन्जेल हाम्रो सामाजमा रहेको विभेदहरुबारे मौन बस्ने ? कि सँगसँगै समाजका कुरितिहरु पनि हटाउने प्रयास गर्ने ? के यो आन्दोलन माफर्त वर्षो सम्म अमानविय व्यवहार खपेर बसेकाहरुलाई सम्मान दिनु गलत हो ?
← Response to criticism on ‘We Are Sorry’ campaign for social reform
Nepal Response to the dreadful Earthquake so far →